नेकपाको जनवर्गीय संगठनको भागवण्डा टुंगियो, कसलाई कुन जिम्मेवारी (नामावलीसहित) « हाम्रो ईकोनोमी
नेकपाको जनवर्गीय संगठनको भागवण्डा टुंगियो, कसलाई कुन जिम्मेवारी (नामावलीसहित)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) जनवर्गीय संगठनको भागवण्डा टुंगिएको छ । आज बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले सबै जनवर्गीय संगठनको प्रमुखको जिम्मेवारी टुंग्याएको हो ।
जस अनुसार अनेरास्ववियूको अध्यक्षमा ऐन महर, वाईसीएलको अध्यक्ष दीपशीखा, महिलाको अध्यक्षमा अमृता थापामगर, पत्रकारको अध्यक्षमा महेश्वर दाहाल बुद्धिजीवीको अध्यक्षमा डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, मजदूरको अध्यक्षमा विनोद श्रेष्ठलेजिम्मेवारी पाएका छन् ।
हेर्नुस सुची :
अनेरास्ववियूको अध्यक्ष : ऐन महर
वाईसीएलको अध्यक्ष : दीपशीखा
महिलाको अध्यक्ष : अमृता थापामगर
पत्रकारको अध्यक्ष : महेश्वर दाहाल
बुद्धिजीवीको अध्यक्ष : डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा
मजदूरको अध्यक्ष : विनोद श्रेष्ठ
विद्यार्थीमा ऐन महर, युवामा दिपशिखा
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले जनवर्गीय एकताको टुंगो लगाएको छ । बिहीबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले एकताको टुंगो लगाएको हो । बैठकपछि संचारकर्मीहरुसंगको कुराकानीमा पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जनवर्गीय एकता टुङ्गयाएको जानकारी दिए । युवाको अध्यक्ष पूर्व माओवादीले पाउँदा रामप्रसाद सापकोटाले पाएका छन् ।
त्यस्तै, विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व ऐन महरले पाएका छन् । त्यस्तै महिला संगठनको नेतृत्व अमृता थापालmे मजदुर संगठनको नेतृत्व विनोदा श्रेष्ठ र पत्रकार संगठनको नेतृत्व महेश्वर दाहालले पाएका छनु् । दाहाललको पोलिटब्यूरोमा पनि नाम आएको छ ।